Indlu yaseBreakwater Beach - I-Airbnb
Indlu yaseBreakwater Beach
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguFawne
Isanda kulungiswa, i-nautical themed, ikhaya eliphambi kolwandle elibekwe kuluntu oluselunxwemeni lweStoney Island kwiCape Sable Island. Yonwabela ukuphuma kwelanga okuhle kwipatio enkulu. Thatha uhambo lokuhambahamba elunxwemeni olusecaleni nje umgama omde. Jikela kwigumbi lokuhlala elipholileyo kwaye ubukele izikhephe zibuya kusuku elwandle. Vumela iingxaki zakho zikhukuliseke kwisauna yethu yomphunga. Nokuba siyintoni na isizathu, okanye ixesha lonyaka, yenza iBreakwater Beach House ibe yindawo yakho yokugqibela yosapho kunye nabahlobo! Akukho zilwanyana zasekhaya nceda ngenxa yokwaliwa ngumnini.
Sinikezela ngokukhetha kwakho amagumbi okulala amathathu kumgangatho ophambili. Igumbi lethu lokulala elikhulu linebhedi yokumkanikazi kunye nebhafu yesoaker enembono entle yolwandle. Igumbi lethu lokulala lesibini linebhedi enkulu kunye negumbi lokuhlambela labucala. Igumbi lokulala lesithathu lineebhedi ezimbini kunye ne-futon yendawo yokulala eyongezelelweyo. Kukho igumbi lokuhlambela elinamagumbi amathathu kwindawo yokuhlala ephambili kunye nesauna yethu yokuphumla. Umgangatho ophambili unombono ovulekileyo oneendawo ezininzi zokuhlala ezitofotofo kunye nomgangatho ukuya kwiifestile zesilingi kulo lonke. Kukho itafile enkulu yokutya ngexesha lokutya okanye imidlalo. Ikhitshi ebanzi inezixhobo ezitsha, indawo eninzi yokukhawulelana kunye nezinto ezibonelela ngazo zonke iimfuno zakho zokupheka. Ngaphandle nje, phumla kwipatio yethu enkulu okanye uchithe ixesha ujikeleze umlilo wenkampu. I-BBQ, itafile kunye nezitulo zilungiselelwe ukutya ngaphandle. Jonga iintaka ezijikeleze idama kwipropathi okanye uhambe unxweme oluhle lwesanti emhlophe elunxwemeni. Sikwanayo neFiber Optic WIFI kunye neSmart Tv enokufikelela kwiDisney Plus kunye neNetflix.
55" HDTV ene-I-Disney+, I-Netflix
Sikwilali yaseStoney Island kwiCape Sable Island. Esi siqithi sifikeleleka kwindlela enyukayo esuka kwilali yaseBarrington Passage kwaye ilikhaya kwiindawo ezininzi zokuloba kunye neelwandle ezinesanti emhlophe. Impepho epholileyo yolwandle ikugcina upholile ngeentsuku zasehlotyeni ezishushu kwaye imisinga yolwandle igcina amaqondo obushushu abephakathi unyaka wonke. Silikhaya kukutya okuninzi kwaselwandle okukhupha kunye nokutya kwiindawo zokutyela ke kuya kufuneka uzame enye okanye ezimbini ngexesha lokuhlala kwakho nathi!
Umbuki zindwendwe ngu- Fawne